के सैतान वास्तविक व्यक्ति हो?
आवरण लेख के सैतान वास्तविक व्यक्ति हो?
आवरण लेख के सैतान दुष्ट्याइँको प्रतीक मात्रै हो?
आवरण लेख के हामी सैतानसित डराउनु पर्छ?
छिमेकीसित कुराकानी परमेश्वरको राज्यले कहिलेदेखि शासन गर्न थाल्यो? (भाग २)
तिनीहरूको विश्वास अनुकरण गर्नुहोस् ‘मैले कसरी यस्तो घोर दुष्ट काम गर्नु?’
प्रहरीधरहरा | नोभेम्बर २०१४
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उम्बुन्डु उरुन्ड् एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली न्यानेका पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) माम माया मालागासी मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वायुनाइकी वारे-वारे शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
सैतानलाई भ्रष्ट अनि स्वर्गबाट खसालिएको स्वर्गदूतको रूपमा देखाइएको एउटा मूर्ति, म्याड्रिड, स्पेन।
“म एल साल्भाडोरमा हुर्कें। मैले अटेर गर्दा आमा यसो भन्नुहुन्थ्यो: “सैतान तिमीलाई लैजान आउँदै छ है!” जवाफमा म यसो भन्थें: “आउन दिनुहोस्, त्यसलाई!” म परमेश्वरमा विश्वास गर्थें, तर सैतान चाहिं छैन जस्तो लाग्थ्यो।”—रोकेल्यो।
के तपाईं पनि रोकेल्योको कुरामा सहमत हुनुहुन्छ? सैतानबारे मानिसहरूको विभिन्न धारणा छ, जसमध्ये केही तल दिइएका छन्‌। यीमध्ये तपाईंलाई कुन चाहिं ठीक हो जस्तो लाग्छ?
सैतान वास्तविक व्यक्ति होइन; त्यो त दुष्ट्याइँको प्रतीक मात्र हो।
सैतान साँच्चै छ। तर त्यसले मानिसहरूमा खासै चासो लिंदैन।
सैतान शक्तिशाली अदृश्य व्यक्ति हो र त्यसले मानिसहरूमा नराम्रो प्रभाव जमाइरहेको छ।
माथि दिइएका प्रत्येक धारणालाई समर्थन गर्ने लाखौं मानिसहरू छन्‌। तर कुन चाहिं धारणा सही हो भनेर थाह पाउनु के साँच्चै महत्त्वपूर्ण छ? यो कुरा विचार गर्नुहोस्, यदि सैतान वास्तविक व्यक्ति होइन भने त्यो साँच्चै छ भनेर विश्वास गर्ने सबै मानिसहरू भ्रममा परेका छन्‌। अर्कोतर्फ सैतान साँच्चै छ, तर त्यसले मानिसहरूमा खासै चासो लिंदैन भने त थुप्रै मानिस विनाकारण डराइरहेका छन्‌। तर यदि त्यो साँच्चै एउटा धूर्त व्यक्ति हो भने सैतान मानिसहरूले सोचेभन्दा पनि खतरनाक छ।
पवित्र शास्त्रले यी प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिन्छ, विचार गरौं: सैतान दुष्ट्याइँको प्रतीक मात्र हो वा एक अदृश्य व्यक्ति? यदि अदृश्य व्यक्ति हो भने के सैतानले तपाईंलाई पनि प्रभाव पार्न सक्छ? सक्छ भने तपाईं कसरी सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ?
नोभेम्बर २०१४ | वास्तवमा सैतान के हो?
प्रहरीधरहरा नोभेम्बर २०१४ | वास्तवमा सैतान के हो?